Skype maka mmelite MacOS na mmetụ Bar Bar | Esi m mac
Mmelite Skype maka macOS site na ijikọ Touch Bar
Apple webatara Ogwe aka ahụ na Nọvemba 2016 na ọhụrụ MacBook Pro na ọnwa ole na ole ọtụtụ ndị mmepe a ma ama etinyela ogwe Apple n'ọrụ na ngwa ha. Ndị ọzọ, kwesịrị "ịkwaga taabụ" ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha achọghị ịhapụ ha n'ọsọ teknụzụ. Microsoft, n'aka nke ya, na-aga n'ihu iwere nwayọ nwayọ nwayọ. Izizi zipụrụ ngwa Office ma ugbu a ọ bụ oge Skype.
Versiondị nke anyị mechara emelite kwekọrọ na 7.48 na ya isi mma bụ mwekota na Touch Bar. Chịkwa oku ga-adị nnọọ mfe site taa site na njikwa nke ogwe Apple.
Ọrụ ndị emejuputara abughi naanị njedebe, njedebe, ogbi na bọtịnụ olu. Ma Anyị nwekwara ike ịhụ foto profaịlụ nke ndị ọrụ ejikọrọ, iji malite mkparịta ụka ọdịyo ma ọ bụ vidiyo na ha ozugbo. Ma a naghị eji mmanya niile naanị maka bọtịnụ Skype, dị ka nchapụta, mgbapụ na bọtịnụ Siri na-arụ ọrụ. Onye ọ bụla chere na e nwere ọtụtụ ozi na ọ gaghị enwe ntụsara aka, onye nrụpụta na-eji agba iji gosi ụfọdụ bọtịnụ. Ihe omuma atu bu igodo uzo, nke di na uhie uhie.
Akụkụ ha nwere ike ịrụ ọrụ na ọnwa ndị na-abịanụ bụ oge mgbe Ogwe ahụ na-arụ ọrụ: maka oge ahụ, ruo mgbe ị ga-akpọ oku na-aga n'ihu, mmanya anaghị arụ ọrụ. Anyị chere na ha ga na-arụ ọrụ ka anyị nwee ike ịnweta ya mgbe anyị na-abanye ngwa ma ọ bụ jiri ụzọ mkpirisi keyboard.
Na mgbakwunye, mmelite ahụ na-etinye mmelite nke ntọala ndị ọzọ n'ozuzu ha ga-eme ka ngwa dịkwuo mma. Download ngwa ma ọ bụ melite ya, ọ dị mfe dịka tinye gaa na peeji nke Skype, ebe ị nwere ike ịchọpụta ọrụ ndị emebere n'oge na-adịbeghị anya nke ị na-amaghị ruo ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mmelite Skype maka macOS site na ijikọ Touch Bar
Fantastical 2, dị na Mac App Store yana mbelata euro 10
MacOS Sierra Beta 5, Genius Bar, macOS 10.13 URL, na ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac